Dowladda Somaliya oo qabaneyso shirweyne qaran oo lagu qarameynaayo Ciidamada Somalida | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Dowladda Somaliya oo qabaneyso shirweyne qaran oo lagu qarameynaayo Ciidamada Somalida
Dowladda Somaliya oo qabaneyso shirweyne qaran oo lagu qarameynaayo Ciidamada Somalida
Dowladda Somaliya, ayaa waxay wadaa dadaalo kama dambeys ah oo ay ku dooneyso inay isku dhaf ugu sameyso dhammaan Ciidamada Somalida, ee ka hawlgala Maamulada Wadanka ka jira.
Shirweynahaan waxaa la qaban doonaa toddobaadka ugu dambeeya ee bisha Janaayo ee sanadka 2015-ka, waxaana si rasmi ah loogu mideynayaan Ciidamada Somalida. Si Dowladdu awood ugu yeelato in ciidan ay u gayn karto Kismaayo, kuwii Kismaayana u gayn karto Boosaaso.
Wasaarada Gaashaandhiga Somaliya, ayaa dhabarka ka riixeysa shirweynaha qaran. Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu Khamiistii Kismaayo ka sheegay, in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu qaramayn doono Ciidamada Somalida.
Sii Haayaha Wasiirka Wasaarada Gaashaandiga Somaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa ku waramaaya in shirweynahaan laga soo qaybgelin doono Maamul Goboleedyada, laguna midayn doono Ciidamada Somalida.
Sii Haayaha, ayaa xusay in ujeedada Dowladda Federalka uu yahay in la helo ciidan xoogan oo Somaliya ay lee dahay, isla-markaana hanan kara ammaanka gebi ahaanba dalka.
Waxa uu intaa ku daray in qorshahoodu uu yahay in la dhiso qiyaastii 28,000 oo askari, Dowladduna ay awood u lee dahay bixinta kharashaadkii ku bixi lahaa, si looga maarmo ku tiirsanaanta xoogaga shisheeye ee dalka ku sugan.
Sidoo kale wuxuu sheegay in Somaliya ay hadda heysato qiyaastii 20,000 oo askari, iyadoo 10,000 oo ka mid ah uu sheegay inay si toos ah ula hawlgalaan Ciidamada Midowga Afrika, ee Somaliya kula dagaalamaaya Ururka Al Shabaab.
General Xaamud wuxuu warkaan ku sheegay wareysi uu siiyay Idaacada laanta afka Somaliga ee VOA, xilli uu maanta booqasho ku tagey Degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakoo